Posted by Tranquillus | May 29, 2018 | Cilaaqaadka dadka dhexdooda
Ma dooran karno asxaabteena waxaana dhici karta in a kooxda shaqada waa inaan la kulannaa saaxiib adag.
Warar xoogan oo qarsoodi ah, oo si xamaasad leh u xaglinaya, waxaad si cad ujeeda joogtaa saaxiibadaa waxyeelada leh.
Waa kuwan talooyin noocee ah oo ku saabsan barashada maareynta qof jaaliyadeed oo doortay inuu yeesho dabeecad xun.
Kala hadal qofka ku habboon:
Tani waa waxa ugu horeeya ee la sameeyo markaad aragto aragti xun ee qayb ka mid ah asxaabtaada.
Hadal badanaa waa la ogol yahay iska-celin khilaafyada haddii aad doorato ereyadaada.
Taas awgeed, sii wado xushmadda, walwal si aad u fahamto sababaha habdhaqankan iyo in aan lahayn xayiraad.
Way fiicantahay inaad si fiican u socoto adoo miiska saaraya waxa keena dhibaatooyinkaaga iyo waxa laga yaabo inay si qalad u fahmi waayeen.
Haddii ay xaaladdu sii socoto, markaa waa waqtigii si dhakhso ah loo qaadi lahaa tallaabooyinka ilaalinta.
Baro inaad naftaada ilaaliso:
Qaar ka mid ah asxaabta sunta ah waxay saamayn ku yeelan karaan shaqadaada, dhiirigelintaada iyo marmarka qaarkood xitaa guushaada.
Taasi waa sababta ay muhiimka u tahay in la ogaado sida naftaada looga ilaaliyo shaqaalahan noocan oo kale ah waxay bilowdaa adigoo masaafada u dhexeynaya adiga iyo saaxiibkaa.
Marna ha ku haynin diiwaanada qoraalka ah ee is-weydaarsigaaga shaqo-la'aanta, xaaladdan waa inaan laguu diidin.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad haysatid waraaqo ama qoraallo kale oo ay saaxiibkaa isticmaalaan erayo mug leh ama aan habooneyn, ha haynin, waxay isticmaali doonaan adeeg weyn.
READ Sidee loo maamulaa xidhiidhka uu la leeyahay maamulkiisa?
Ha sugin inaad ficil qaado:
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dhaqmeyso, waxay u badan tahay in xaaladdaadu ay si gaara kuu gaarto oo aad sameyso cimilada shaqada sunta.
Haddii sareeyaashu ay ogaadaan in ay saameyn ku yeelato aad u badan, faallooyinkaagu waxay lumin karaan kalsoonida.
Fikraddu waa in la raadiyo taageerada dhexdhexaadiye oo aan rabin in ay xaliso xaalada kaliya.
La socodsii madaxdaada:
Markuu xaalada aan la maamuli karin, waxaa wanaagsan inaad u sheegto sirdoonkaaga.
Laakiin ka hor inta aanad la tashan karin asxaabtaada, isku day in aad ogaato sida xiriirka ay la leeyihiin saaxiibkaa adag uu muuqanayo.
Marka aad sameysid khiyaamo yar, u digo kormeerahaaga tooska ah marka ugu horeysa ee tilmaamaya saameynta taban ee shaqada: dib u dhac ku yimaada faylasha, isgaarsiinta liita ee saameeya horumarka mashaariicda, iwm.
Haddii loo baahdo, la abaabulo asxaabta kale: sarkaalkaagu wuxuu ku qanacsan yahay oo kaliya in uu si degdeg ah u daaweeyo "faylka" si aan u waxyeeleynin niyadda ciidamada haddii aad dhowr jeer ka cabanayso dhaqan xumo.
Sidee loo maareeyaa qof saaxiib ah oo leh fikrad xun? Agoosto 19th, 2018Tranquillus
horeSidee ayey u fiican tahay dhammaan xaaladaha?